Marko waa Magaalo Magaceeda iyo Muuqeeda dib u soo Ceshaneyso | Najah Media Network
Bogga Hore Maqaalo Marko waa Magaalo Magaceeda iyo Muuqeeda dib u soo Ceshaneyso
Marko waa Magaalo Magaceeda iyo Muuqeeda dib u soo Ceshaneyso
WAA WARBIXIN AAN KU EGEEYNO TAARIIKHDA XADAARADDA HORUMARKA IYO NABAD GELYADA AY GAARTAY MAGAALADA MARKO TAN IYO INTII UU GUDOOMIYAHA GOBOLKA SHABEELADDA HOOSE MUDANE IBRAHIM ADAN ALI NAJAH UU GOBOLKA KU HOGAAMINAYAY HOGAAN DAACAD CADAALAD IYO MAAMUL WANAAG AH
MARKO Waa Magaalo ku taala gabaldhaca magaalada Muqdisho una jirto 90 km Marka waa caasimadda gobolka Shabeellaha Hoose waxaana lagu yaqaan quruxdeeda iyo dhaqanka eey dadka degan haaystaan kaasoo aad uga duwan kuwa kale. Waxaa Dhinaca bariga ka jirta Badweynta Hindiya
Magaaladan waxa ay caan ku tahay soo saarida Dharka Aliindiga kalluunka iyo wax soosaarka Beeraha Marka waxaa dagao qabiilo badan oo somali ah iyo inyaroo carab ah qabilada somaalida.
Marka sannadihii ugu dambeyey waxa Gacanta ku hayay amaankeeda iyo Maamulka degmada dowlada federalka Soomaaliay kadib markii Ciidmada Xooga dalka ay ka xureyeen nabad diidka Al-shabab oo beri deeganadaasi Maamulayay balse howl galo ay ciidamada maamulka Gobolka shabeeladda Hoose ay ka fuliyeen Marka ayaa waxa ay dib Gacanta ugu soo noqotay Maamulka Konfur Galbeed Soomaaliya .
Magaalaga marko waxey ka kooban tahay sadex xaafadood oo kala ah Horseed, Wadajir iyo Howlwadaag waxaana waxaa hoos taga xaafado yar 1- Horseed waxaa hoostaga — Bulajaan Buufow iyo Lumabardi 2- Wadajira waxaa hoostaga —- Saraha Beyturaas iyo Awbaale 3- Hoolwadag waxaa hoostaga —- Xaafa Ruushiya, Sheekh Abroone
CAASIMADA GOBOLKA SHABEELADDA HOOSE EE MARKA CADEEY
Maxaad Ka Taqaanaa Magaalada Marka iyo Dadka Deggan?
Magaalada Marka waxay ka mid tahay magaalooyinka maamuuska weyn ku leh Somalia marka laga hadlaayo taariikhda degmooyinka Somalia, gaar ahaan dhaqdhaqaaqii looga hortagayey gumeystihii cadaa ee Soomaaliya ku soo duulay.
Buug 1935-kii uu Somalia ka qoray Pietro Barile oo uu ugu magac daray “Gumeystihii Faashiga Talyaaniga Ee Koonfurta Soomaaliya” ayaa waxaa uu qaybo muhiim ah uu kaga hadlay magaalada Marka iyo beelaha degan. Buuggani wuxuu u kala qaybinayaa magaalada Marka labo qaybood oo kala ah: (1) Deex – oo ah dhulka bacaadka ah ee badda dhaco (2) Dhoobey – oo ah deegaanada hoosyimaado magaalada Marka ee dhaca dhulka dhoobeyda ama wabiga u dhow.
Markaad akhriso hordhaca iyo afeefada buugga (Abstract-ga) ee uu qaray Pietro Barile, wuxuu sheegayaa in mar walbo oo uu wareysto qof reer Marka ah iyo qabiilkiisa, wuxuu sameynayey qoraaga inuu safar u galo tuulooyinka ku hareereysan magaalada Marka si uu halkaas uga soo ogaado in beesha ninkaasi sheegtay inay joogto tuulooyinka magaalada Marka ay maamuleysay xiligaasi, qaabkaasa ayaana lagu saleeyaa maamulada qowmiyadaha deggan degmooyinka aduunka.
SAWIRKAN WAA XILIGII GUMEYSTAHA WAXA UU KA HADLAYAA TAARIKHDA FOG OO AY LEEDAHAY DEGMADA
Dadka Marka jooga badanaa weey tacliin badanyahiin waxeeyna ka shaqeeystaan badda una dhoofaan wadamada Carabta sida Yemen si eey usoo iibiyaan badeecaadkooda kana soo iibsadaan kuwa kale. Badanaa waxeey yihiin Injineeryo iyo Macalimiin. Sidoo kale waxaa dadka Marka badanaa ka yimaado lagu yaqaan Qaalli iyo Ganacsada yaal.
Magaalada Marka waxa ay leedahay Dugsi tacliin iyo Quraan lagu barto,weey ku badanyihiin magaalada Marka waxaana caruurta lagu dheerri geliyaa inay tacliin tooda ka fikiraan si eey u caawiso mustaqbalkooda inkastoo uu hadda dowlad la’aanta eey ka tanbadisay waalidiinta meesha dagan ku waasoo dhib eey ku tahay in eey bixiyaan lacagta dugsiga ama jaamacadda.
Sidoo kale magaalada Marka waxey leedahay hoteelo caan ah dalxiisna loogu imaado sida , Hotel Madiina iyo kuwo kaloo la mid ah. Waxaa kaloo laga heli karaa magaalada Marka maqaayado la fadhiisan la cunaayo sida sambuuska, bajiyaha, kabaabka . Suuqyaasha ku yaalo magaalada waa labo suuq po kala ah kaas oo ku yaalo horseed midna wa Suuqa Weyn ee magaalada Marka. Dadka magaalada Marka joogo badanaa ma cunaan hilibka sida loogu cuno qeybaha kale ee dalka. Dadka badanaa waxeey cunaan malaayga ama kaluunka iyo doorada . Waxaa galabyadii lagu yaqaan in aay cunaan macmacaan yada caanka ka ah Koonfur Soomaaliya ku waasoo lagu cabo qaxwo kharaar. Marmarka qaarne waxeey cunaan bajiye iyo sambuus iyo bisbaas.
CUNTADA AY CAANKA KU TAHAY MARKO WAXA KA MID AH KALLUNKA CANJEERO IYO QAXWAHA
Dadka Marka degan waxeey leeyahiin lahjo af somali ah iyo kuwa u gaar ah taasoo u dhaw mida loogu hadlo Xamar. Lahjadaan waxaa loo yaqaan Af Marka ama Af Asharaaf waxaana badana ku hadlo dadka gibilcadka iyo lahjad arow la dhaho oo ay ku hadlaan Biyomaalka ee degan koonfurta wadanka. Dadka Reer Marka waxey dhahaan;
” Marka Cadeey, Minin Ow Osman, Muufo kuus kuus iyo macmacaan, Martidii moodo munaafaq waaye.”
WAA QARIIRADA DHULKA AY KU FADHIDO MAGAALADA MARKO WAXA QORAY GUMEYSTIHII TALYANAIGA
Waxqabadka Gudoomiyaha Gobolka Shabeeladda Hoose ee Marka
Gudoomiyaha Gobolka shabeeladda Hoose Hon Ibrahin Adan Ali Najah ayaa booqday Marka
Gudoomiye Madaale Najah ayaa waxa uu ka hirgeliyay Xaruumo dan guud sida Dhsimaha xarunta maamulka Gobolka Shabellaha hoose ka dhisey magaala madaxda Marka, dhawaan ayaa si rasmi ah ayuu maamulka sarre ee gobolka ugu shaqeyn doonnaa xaruntan.
sidoo kale Madaale Ibrahim Adan Ali Najah ayaa waxa uu indha-indheyn ku sameyay dhismaha garoonka kubbadda cagta ee Ayuub oo dhawaan si rasmi ah loo furi doonno.
WAA GUDOOMIYAHA GOBOLKA SHABEELLADDA HOOSE HON IBRAHIM ADAN ALI NAJAH
Dhinaca waxbarashadda iyo sarre u qaadiida garaadka Bulshadda
Waxaa laga fuliyay magaaladda Marka Tababar lagu tayeeyno dhalinyarrada magaalada Marka iyo xoojinta sidii ay ula shaqeyn lahaayeen Maamulka Degmada iyo Ciidamada Amaanka.
Tababaradaan ayaa waxaa sare loogu qaadayaa aqoonta bulshadda iyo taclinta jiilka cusub ee soo koraya
WAA MACALIN MAXAMED OO CASHAR U SHARXAAYO ARDAY DEGMADA MARKO
WAA MACALIN MAXAMED OO AH MACALIN DHIGA CILMIGA NOLOSHA
USTAAD MAXAMED OO CASHARO BIXINAAYO WAA AQOON KORORSI LAGU QABTAY MARKO
Magaalada Marka ayaa waxa soo hagaageyso nabadgalyadeeda iyo xalaalada Guud ee Magalada waxa ka jira awood Ciidaan oo Maamulka Gobolka shabeelada Hoose Ka amar qaato Ciidamada Dowlada qeybta 14 October iyo ciidamo Boolis ah kuwaasi oo ka shaqeeyo amaanka Guud ee Magalada
Sidoo kale waxa Jooga ciidamada Nabad Ilaalinta Amisom kuwaasi oo Gacan siiya kuwa Xooga dalka Soomalaiyed sida dhinaca tababarada iyo sanaada Mlitariga
CIIDAMADA XOOGA DALKA SOOMAALIYED IYO KUWA MAAMULKA SHABEELADDA HOOSE OO HOWLGALO WADDA
WAA WAR MURTIYEED KA SOO BAXAY AMISOM XILIGII AY GACANTA DOWALADA DIB U SOO GASHAY MARKO
Ugu dambeyntii Marka waa magaalo xadaari ah waxana ay ka mid tahay magaalooyinka soomaaliya ugu caansan
Hal maqaal ama warbixin lagu ma soo koobi karo tariikhda iyo waxbadka maamulka Gobolka shabeelada Hoose ka sameeyay magalada Marka.
WAXAA INOO BALAN AH
Daryeel iyo Dowladnimo.
Nabad iyo Najah.
Maqaal horeGudoomiyaha Baarlamanka KGS oo Baydhabo kulan aqoon kororsi ah ugu qabtey qaar ka mid ah ardeyda dhigata Jaamacadaha
Maqaal XigaKoox hubeysan oo dad Shacab ah ku dilay Shabeellada Hoose